आइस लेकमा माउन्टेन हट : पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने उपयुक्त विकल्प – Highlights Tourism
विश्व प्रसिद्ध चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग सडक सञ्जालको विस्तार सँगै अस्वाभाविक रूपमा छोटिन गएको छ । यसर्थ स्थानीयवासी र राष्ट्रले पर्याप्त फाइदा लिन नसकी रहेको अवस्थामा पर्यटकको बसाई कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ र पर्याप्त फाइदा लिन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्न आवश्यक भैसकेको छ ।
हवाई मार्ग र सडक सञ्जालको विस्तार अघि १ महिना लाग्ने चक्रीय पदमार्ग अहिले १ हप्तासम्ममा सीमित हुन आई पुगेको छ । मनाङ जिल्लाको उच्च मानवबस्ती खाङसारसम्मै सडक सञ्जाल पुगेको छ । विगतमा एक हप्ता लाग्ने खङसार हाल बेंशीसहरबाट गाडीमा एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ ।
सडक सञ्जालको विस्तारले गर्दा धेरै जस्तो पर्यटकहरू तल्लो भूभाग (Low land) र तल्लो उचाइ (Low Altitude) बाट पदयात्रा सुरु गर्ने वातावरण हराउँदै गएको छ । धेरैजसो पर्यटक हाल चामे वा धारापानीबाट पदयात्रा सुरु गर्दछन् । लमजुङको खुदी, भुलभुले, ङादीजस्ता प्रख्यात पदयात्रा आरम्भ हुने पर्यटकीय बस्तीहरूको रूपरंग फेरिई सकेको छ । यसर्थ मनाङ जस्ता उच्च उचाइको बस्तीमा पदयात्री छिट्टै पुगिने भएकोले बसाई लम्ब्याउन, उच्च उचाइ बिरामी (High Altitude Sickness) बाट जोगाउन, पर्यटकको पदयात्रा अविस्मरणीय बनाउन ब्रागा गाउँदेखि उत्तर ४६०० मिटरको उचाइमा रहेको आइस लेक क्षेत्र माउन्टेन हट बनाउन उपयुक्त विकल्प हो । त्यहाँ पुग्न मनाङ (मानव बस्ती) बाट ५-६ घण्टा लाग्दछ भन्ने ब्रागाबाट पुग्न ४-५ घण्टा लाग्दछ । हिँडाई र शारीरिक सक्षमताले पनि पुग्ने समय निर्भर गर्दछ ।
पर्यावरणीय र वातावरणीय अनुकूलता (Ecological & Environmental Friendly) हाल विश्वको पहिलो प्राथमिक विषयमा पर्दछ । त्यसैमा पनि नेपालको पर्वतीय पर्यटन मौसमी पर्यटनमा आधारित छ । आइस लेक जस्तो पदमार्ग भन्दा बाहिरको क्षेत्र बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन पनि कठिन छ । अर्को तर्फ त्यहाँको शान्त र सुन्दर वातावरण, त्यहाँबाट देखिने दृश्य शब्दमा वर्णन गर्नै मुस्किल छ । सूचना प्रविधिले मानिसको दैनिक जीवनमा धेरै सहजता ल्याई दिए पनि मानसिक तनाव पनि उत्तिकै बढाई दिएको छ । यस्तै मानसिक शान्तिको खातिर छोटो साधना (Retreat) को लागि त्यो भन्दा उत्तम स्थान कहाँ होला र?
माउन्टेन हट नै किन?
पर्यावरणलाई जोगाउन, पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन, त्यहाँको निर्मल स्वच्छ वातावरण कायम राख्न, गुणस्तरीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्न स्थायी र धेरै संरचना (लज र होटलहरु) नबनाई माउन्टेन हट्नै उत्तम विकल्प हो । ओभर नाइट बस्ने पर्यटकहरूलाई टेन्टमा राख्न सकिन्छ । सबैभन्दा उपयुक्त किन छ भन्दा पानीको पर्याप्त स्रोत र जमिनको अवस्थिति (Terrain) साह्रै अनुकूल छ ।
कसले बनाउने र सञ्चालन गर्ने?
पर्यावरण र वातावरण अनुकूल पर्यटन त छँदै छ त्यो सँगसँगै दिगोपन (Sustainability) पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसर्थ यस्तो माउन्टेन हट बनाई सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउने वातावरणलाई सुरुमै निस्तेज पार्नु पर्दछ । बढी भन्दा बढी स्थानीयबासीलाई सहभागिता गराई सबैलाई लाभ बाँडफाँड हुने कार्यनीति अख्तियार गर्नु पर्दछ । लगानी र प्रतिफलमा सहभागिता नगराए सम्म यस्तो कार्यमा दिगोपना हुँदैन । यस्तो कार्यलाई दिगो बनाउनै पर्दछ र संभव छ ।
स्रोत कसरी जुटाउने?
स्थानीय सरकार (गाउँपालिका), प्रदेश सरकार (प्रदेश पर्यटन मन्त्रालय) र एक्याप जस्ता निकाय जसले पर्यटकबाट उठाउने शुल्कको केही हिस्सा छुट्टाएर सहजतासाथ माउन्टेन हट निर्माण गर्न सकिन्छ ।
– गुरुङ गण्डकी अल्पाइन क्लबका सहसचिव हुन् ।
Previous article कोरोना कालमा मर्दी पदमार्गको स्तरोन्नति
Next article माउन्टेन गाइड लाइसेन्स नहुँदा आरोहीलाई सास्ती